3joyoStream: Nahwa Travel Malang Juanda
Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain A njem gị n'ụlọnga bụ a onwe-ere ahịa ma ọ bụ ọha ọrụ na-enye njem na njem metụtara ọrụ ndị ọha na eze na nnọchite nke suppliers ndị dị otú ahụ dị ka ihe omume, ụgbọ elu, ụgbọ ala a na-ebiri, ụgbọ edoghi, hotels, ụgbọ okporo ígwè, njem mkpuchi, na ngwugwu njegharị. Na mgbakwunye na-emeso ndị nkịtị-eme njem nleta ọtụtụ njem ụlọ ọrụ nwere dị iche iche ngalaba ewepụtara na-eme njem a maka azụmahịa njem na ụfọdụ njem ụlọ ọrụ ipuiche azụmahịa na azụmahịa njem naanị. E nwekwara njem ụlọ ọrụ na-eje ozi dị n'ozuzu ahịa elekọta mmadụ maka mba ọzọ njem ụlọ ọrụ, nye ha ohere ịmụta itieutom ke mba ọzọ karịa ebe ha n'isi ụlọ ọrụ na-emi odude.
The oge a njem gị n'ụlọnga mbụ pụtara na nkera nke abụọ nke narị afọ nke 19. Thomas Cook guzosie ike a yinye ụlọ ọrụ ke akpatre nkeji iri na ise nke narị afọ nke 19, ná mmekọrịta ya na Midland Railway. Bụghị nanị na ha rere ha tours ka ọha na eze, ma e wezụga, na-anọchi anya ndị ọzọ tour ụlọ ọrụ. Ndị ọzọ British ọsụ ụzọ njem ụlọ ọrụ ndị Dean & Dawson, ndị Polytechnic Touring Association, na Co-ịkpa N'ogbe Society. Ndị kasị ochie njem gị n'ụlọnga na United States bụ Brownell Travel; on 4 July 1887, Walter T. Brownell ada iri njem on a European tour, aba n'ụgbọ mmiri ịpụwa si New York na SS Devonia. Travel Malang Juanda? Pilih Nahwa Travel, Bukan yang Lain
Travel ụlọ ọrụ ghọrọ ihe zuru ebe nile na mmepe nke azụmahịa ụgbọelu, malite na 1920s. Na mbụ, njem ụlọ ọrụ n'ụzọ dị ukwuu catered ka n'etiti na elu klas ahịa, ma post-agha ọganihu ke uka-ahịa ngwugwu ememe rụpụtara na proliferation nke njem ụlọ ọrụ na isi n'okporo ámá ndị kasị British obodo-ya, nri na-a-arụ ọrụ na klas klientele na-achọ a -adaba adaba n'ụzọ ka akwụkwọ esenidụt osimiri ezumike.
A njem gị n'ụlọnga bụ isi ọrụ bụ na-eme ihe dị ka ihe gị n'ụlọnga, na-ere njem ngwaahịa na ọrụ na nnọchite nke a soplaya. N'ihi ya, n'adịghị ka ndị ọzọ mkpọsa ulo oru, ha adịghị edebe a ngwaahịa na aka, ma ọ bụrụ na ha nwere tupu-gbaa akwụkwọ hotel ụlọ na / ma ọ cabins on a nrughari ụgbọ mmiri maka otu ìgwè njem omume dị ka a agbamakwụkwọ, honiimuunu, ma ọ bụ otu ìgwè omume. A ngwugwu ezumike ma ọ bụ a tiketi na-adịghị zụrụ n'aka a soplaya ma ọ bụrụ na a ahịa arịrịọ na-azụ. The ezumike ma ọ bụ mebie ihe na-ọnọ aka gị n'ụlọnga na a ego. The uru bụ ya mere ihe dị iche n'etiti ndị advertised price nke ndị ahịa na-akwụ na ego dị na nke ọ na-ọnọ aka gị n'ụlọnga. Nke a na-mara dị ka ọrụ. N'ọtụtụ mba, ndị niile ndị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-ere tiketi na-achọrọ-ikikere dị ka a njem gị n'ụlọnga.
Posted by Dipo Trijoyo at 10:36 AM